UK hamongotra fitsapana PCR tsy maintsy atao ho an'ireo mpandeha vaksiny
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny UK » UK hamongotra fitsapana PCR tsy maintsy atao ho an'ireo mpandeha vaksiny
Airlines • Airport • Associations News • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK
Ny fitondrana fitsapana PCR dia nanaporofo fa tsy mety, lafo ary antony iray lehibe mahatonga ny fahatarana be eo amin'ny sisintany. Indraindray koa tsy mitombina izany.
UK hamarana ny fitsapana PCR ho an'ireo mpandeha vaksiny feno.
Deraina ny ezaka ataon'ny tompon'andraikitra any UK hamarana ny mandat ny fitsapana PCR,
Ny fanesorana ny takiana amin'ny fanaovana vaksiny indroa dia "ankasitrahana indrindra".
Rehefa niely ny tombantombana momba ny fanesorana ireo fanadinana PCR tsy maintsy atao amin'ny fahatongavana vaksiny indroa ao UK Tom Jenkins, CEO an'ny ETOA, dia nanao izao fanamarihana manaraka izao:
“Ny fitondrana fitsapana PCR dia voaporofo fa tsy mandeha amin'ny laoniny, lafo ary mpandray anjara lehibe amin'ny fahatarana be eo amin'ny sisintany. Indraindray koa tsy mitombina izany. Izay rehetra mivoaka ny UK mandritra ny 36 ora latsaka ny adiny dia tokony hanao ny fanadinana "mialoha fahatongavany" any UK, mba hanaporofoana fa azo antoka ny fiverenan'izy ireo any UK. Ka ny fanesorana ireo vaksiny roa sosona dia ankasitrahana indrindra.
Tom Jenkins, tale jeneralin'ny ETOA
“Saingy zava-dehibe tokoa ity fanalefahana ity ho an'ireo mpitsidika vita vaksiny indroa, fa tsy i Brits ihany. ny UK nanasaraka tamim-pahombiazana ny tenany tamin'ireo mpitsidika tonga ary nivily lalana any ambadiky ny toerana hafa rehetra any Eropa izy vokatr'izany. Na dia efa nihena fatiantoka tanteraka aza ny indostrian'ny fizahan-tany izay mitentina £ 30 miliara tao anatin'izay roa taona lasa izay dia mila manamboatra haingana ny endritsika isika ho toy ny toerana hitsidika sy mivantana hitsidihana. Arakaraka ny faharetan'ny fahatarana, no vao mainka manimba ny toekarena any UK. ”
Amin'izao fotoana izao, raha te hiditra any Angletera, ny mpandeha dia tsy maintsy manana porofon'ny fitsapana COVID-19 ratsy any amin'ny seranam-piaramanidina hiainganao, nalaina tao anatin'ny 3 andro taorian'ny nandosihanao nankany Angletera. Ny fitsapana dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fitsipika sy fenitra voalaza ao amin'ny Governemanta UK.
ETOA (fikambanan'ny fizahantany eropeana) dia fikambanan'ny mpivarotra sy mpamatsy fizahantany any amin'ny toeran-tany eropeana, manomboka amin'ny marika manerantany ka hatramin'ny orinasa tsy miankina eto an-toerana.